चन्द्रागिरि चुचुरोमा ‘पिपिइ’प्रति समर्पित केही सृजना – Sulsule
सुलसुले २०७८ वैशाख १ गते १३:१२ मा प्रकाशित
मानिसको योगदान अथवा असल कामको स्मरण कसरी गर्ने ? सम्मान पत्र प्रदान गरेर, स्मारिका या पुस्तक छापेर, राज्यले उचित या आवश्यक पारिश्रमिक दिएर अथवा उनीहरुको कदरयोग्य केही काम गरेर । मानिसका योगदानको सम्झना विभिन्न विधि र तरिकाबाट गर्न सकिन्छ ।
यहाँ भने स्रष्टाहरुले आफ्ना सृजनाको माध्यमबाट मानिसको योगदानको स्मरण गरेका छन् । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको पेशा सामान्य समयमा पनि नागरिकको ज्यान बचाउने पवित्र कार्य अर्थात् जिम्मेवारी प्राप्त हो । त्यसमा पनि कोरोना कालमा उनीहरुले गरेको सेवा अरु कोही व्यक्ति तथा केही वस्तुसँग अतुलनीय छ । मानवीय जीवनलाई लगभग सङ्कटमा पार्न आँटेको कोरोना जीवाणुलाई परास्त गर्न उनीहरुले अग्रमोर्चा (फ्रन्टलाइन) मै खटेर काम गरेको हामी सबैले देखेका छौँ । यिनै सेवकहरुको सेवाको सम्मान कविहरुले कविताबाट गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीका समयको पीडालाई कवि किशोर पहाडीले यसरी उतारे । उनले एक समय नेपालमा कोरोनाको कहरले देशभर सन्नाटा छाएको र महामारी सिर्जित समस्याका कारण देशका अखबारहरुमा अक्षर होइन आँशु छापिएको अवस्थाको चित्रण ‘अश्रु आख्यान’ शीर्षकको कवितामा गरेका छन् ।
आइसियु कोठाभित्र स्मृति आफ्नो लोग्नेको
आइसियुभित्रको कथा हो यो । कोही आफन्त आइसियुमा भर्ना भएका बेला पर्ने पिरको मापन आधुनिक विज्ञानको कुनै यन्त्रले पनि गर्न सक्दैन । आइसियुका बिरामीहरुमा कतिले आमा, कसैले लोग्ने त कसैले आफ्ना सन्तानको आकृति देख्ने गर्छन् । आफन्त परेकाहरुको स्मृतिमा आउँछ यो आकृति । कविले अघि भनेका छन्–
हो, अखबारमा आँशु छापेर रोकिन्न पीडितको आँशु । कविको सुझाव छ, आँशु थामिन त पिपिइ लगाइ काम गरेकाहरुलाई सलाम गर्नुपर्छ । राससका अनुसार सलाम, कविको प्रतीकात्मक सन्देश हो, हातले मात्र नभएर विभिन्न हिसाबले गर्न सकिन्छ यस्ता व्यक्तिलाई सलाम । समाजले सम्मान दिएर, राज्यले आवश्यक सुविधा दिएर अनि घर परिवारले माया र हौसला दिएर गर्न सकिन्छ उनीहरुप्रति सम्मान ।
कवि युवराज अधिकारी फ्रन्टलाइनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई यसरी अभिवादन गर्छन् ।
कवि दिनेश अधिकारीको कविताले हरेक बुबाआमाको आफ्ना सन्तानप्रतिको माया अभिव्यक्त गर्छ । कविको भावनाले महामारीमा आमाबुबा गुमाएकाको मुटु छुन्छ । ‘मरणको आनन्द’ शीर्षकको कविताको भावले भन्छ– बाबु भएपछि थाहा भयो सन्तानभन्दा माथि केही हुँदोरहेनछ ।
त्यस अवसरमा प्रभा भट्टराई, राजेश्वर कार्की, लक्ष्मण गाम्नागे, मोमिला, मणि लोहनी, क्रान्ति पराजुली, इल्या भट्टराई र एलिसा ढुङ्गानाले आफ्ना सृजनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निकै भावुक हुँदै आफू कोरोना सङ्क्रमित भएको बेलाको पीडादायी अनुभव सुनाए । उनले भने, “खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भनेजस्तै यो महामारीको मार पर्नेलाई मात्र थाहा हुँदो रहेछ, मैले पनि मृत्युसँग साक्षात्कार गरेर आएको हुँ, तर मेरा यी अनुभवहरुले मजस्ता सङ्क्रमित तथा तिनका आफन्तलाई झन् बढी पीडा होला भनेर मेरा नमिठा यादहरुलाई सार्वजनिक गरिनँ ।”
ढकालले भने, “म पनि मृत्युलाई देखेर आएको मान्छे, तपाईंहरुजस्तै कवि भएको भए कति कविता लेख्दो हुँ ? तर कविता लेख्न भने जान्दिनँ ।” उनले अहिले पनि देश कोरोनाको कहरबाट बाहिर ननिस्किसकेकोले यस्ता सन्देशमूलक कार्यक्रमहरु गरेर महामारीमा खटेकाहरुप्रति श्रद्धा जगाउनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ कवि तुल्सी दिवसले कविता अक्षरमात्र होइन भन्दै कवितामा अभिव्यक्त घटना या परिस्थितिले जुनसुकै अवस्थालाई पनि जीवन्त बनाउने धारणा राखे । उनले भने, “कसैको पनि असल कामको गुणगानको चर्चा गर्नु भनेको त्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई जीवन्त बनाउनु हो, आज हामीले जसरी महामारीमा खटेका, सेवा गरेका व्यक्तिहरुलाई हाम्रा सृजनामार्फत् सम्झियौँ, यसले राज्यलाई पनि यस्ता कार्यको स्मरण गर्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ ।”
कुनै असल र खराब कामको बारेमा समाज र देशलाई जनाउ दिने काम साहित्यकारहरुको हो भन्दै उनले महामारीमा खटेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुप्रति साहित्यकारहरुले सृजनात्मकरूपमा गरेको यो अत्यन्तै ठूलो सम्मान भएको धारणा राखे । हाम्रो देश र विदेशमा पनि महामारीको अन्त्य भइनसकेकोले यस्ता सन्देशमूलक कार्यक्रमहरुका शृङ्खला नै चलाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।